सिनेमा - नेपाल
सेन्सरको नाममा चीरहरण
गोकर्ण गौतम, असार ३०, २०७६
सिर्जनामा कैँची, सिनेकर्मीलाई सास्ती
Tags: सिनेमासेन्सर बोर्डमनोरञ्जन
गोकर्ण गौतम, जेष्ठ १४, २०७६
रातारात हिट हुने होडमा प्रायोजित प्रेम र लफडाको लहरोले कलाकारको साख खस्कँदो
गोकर्ण गौतम, वैशाख ३०, २०७६
फिल्म नचलेको झोक समीक्षकमाथि पोख्ने कलाकर्मीको प्रवृत्ति
Tags: सिनेमाफिल्म समीक्षक
एभेन्जर्स : इन्डगेम
नेपाल संवाददाता , वैशाख १९, २०७६
यो साता विश्वभरिकै सहरमा सर्वत्र चर्चा चल्यो, एभेन्जर्स : इन्डगेमको ।
कस्तो फिल्म राम्रो ?
यज्ञश, वैशाख ११, २०७६
मान्छेले तीन घन्टा आरामले सुतेर वा रेस्टुराँमा साथीसँग बसेर पनि बिताउन सक्छ । त्यो समय यदि तपाईंको फिल्मलाई दिन्छ भने उसलाई केही नयाँ कुरा दिने, अनुभूति दिलाउने जिम्मा तपाईंको हो । फिल्म बनाउनेलाई यति बोध भएको दिनमा राम्रो फिल्म बन्नेछन् ।
केले बनायो कमजोर ?
यज्ञश, चैत्र २८, २०७५
फिल्म ठूलो घटना वा भव्य सेटिङले मात्र राम्रो हुने होइन । निकै सानो विषयमा, सानो धागोको त्यान्द्रोजस्तो विषयमा पनि मिहीन ढंगले बुनिएको फिल्म बन्न सक्छ । प्रायः त्यस्तै फिल्मले धेरै दर्शकको मन जितेका पनि छन् । सानो वस्तु जहाँ पनि अटाउन सक्छ ।